Doontii Bossaso ku gubatay & madaxda Puntland oo ka hadlay. – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2009 12:00 b 0
Bossaso, Oct 10 – Waxaa gabi ahaanba gubtay doontii maanta dabku ku qabsaday dekedda magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari iyo dhammaan wixii saarnaa doontaasi.
Dadweynaha reer Bossaso ayaa maanta hal mar ku baraarugay ciiq iyo uura cirka isku shareeray waxaana la arkayey dadka oo u didaya dhinaca dekedda si ay u ogaadaan waxa dhacay iyadoo inta badan dadweynuhuna ay dhagta ku hayeen idaacadaha gaar ahaan idaacadda Daljir oo si toos ah u soo gudbinaysay hadba meesha waxmarayaan.
Jawiga magaalada ayaa mar qura isbadalay waxaana dadku ka cabsanayeen in dabku gaaro dekadedda iyo goobaha ku dhaw taas khatarteeda leh, waxaana la maqlayey raasaas ay ridayaan ciidamada booliska oo lagu daadiyey waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa dekedda si jidka loogu furo booyadaha iyo madaxda dawladda oo ku soo qulqulayey dekadda kuwaasi oo uu ka mid ahaa madaxweyne Faroole.
Duqa degmada Bossaso C/risaaq Xareed Simaaciil ayaa u sheegay idaacadda Daljir in uu gaari maray hal qof intii hawshaasi lagu jiray oo uu dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dabkaasi ayna dhammaanba gubatay doontii iyo wixii saarnaa.
Wasiirka dekedaha ee Puntland C/risaaq Xuseen Gaceyte ayaa goordhaweyd Daljir u sheegey inay xabsiga dhigeen naakhuudihii doonta gubatay iyo qaar ka mid ah shaqaalihii doontaasi lana baarayo sida ay wax u dheceen.
Doonta gubatay ayaa laga lahaa dalka Hindiya waxaana ay rar u siday ganacsto reer Bossaso ah iyadoo ka timid wadanka isutaga imaaraadka carabta oo ay rarka ka soo qaaday.
Duqa magaalada oo aan ka waraysanay dooni ku basbeeshay dekeda Bossaso. [Dhegaysi …]